ရွှေဝါရောင် - ကမ္ဘာပေါ်မှာစျေးအကြီးဆုံးအမွှေးအကြိုင်နှင့်တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်း
Safran | နံ့သာမျိုးကိုချက်ပြုတ်သည့်အခါ
ရွှေဝါရောင်၏ကုစားခြင်းအင်အားကြီး - ဒဏ္ဍာရီနှင့်ဒဏ္ဍာရီ
ရွှေဝါရောင်လည်းနံ့သာမျိုးကိုရှင်ဘုရင်၏အဖြစ်လူသိများသည်။ မရကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာစျေးအကြီးဆုံးအမွှေးအကြိုင်သောကွောငျ့, အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ။ ကစက်ရုံ "နှင်းပွ sativus" ၏ပန်းပွင့်ကနေထုတ်ယူသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပန်းပွင့်မှသာသုံးအမည်းစက်ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
ရွှေဝါရောင် - ကမ္ဘာပေါ်မှာစျေးအကြီးဆုံးအမွှေးအကြိုင်များနှင့်ကိုးကွယ်ရာ
ရွှေဝါရောင်အပင်တဦးတည်းကီလို၏စပါးရိတ်ရာကာလအဘို့အ 200.000 ရန်လိုအပ်သည်။
ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအကြီးဆုံးအမွှေးအကြိုင် - နှင်းပွ sativus မှရရှိသော
အဆိုပါချည်စက်တို့ကရိတ်သိမ်းမရနိုငျကတည်းကဒီနေရာမှာလောကီကို manual အလုပ်ကြေညာခဲ့သည်။ မြို့သားဒီအမွှေးအကြိုင်များ၏ဘုန်းအများအတွက်အကြောင်းပြချက်တည်ရှိသည်။
ရွှေဝါရောင်ပထမဦးဆုံးဂရိဒဏ္ဍာရီထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည်။ ဒဏ္ဍာရီအဆိုအရဇုထိုဘဏ္ဍာတစ်အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ကြပါပြီဟုလျှောက်သည်။ အဆိုပါနံ့သာရှင်ဘုရင်က, မြောက်မြားစွာဒဏ္ဍာရီဖြစ်သည်, သို့သော်၎င်း၏သည်အနာပျောက်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းစွာလှည့်ဖျားလူသိများနှင့်တန်ဖိုးထားသည်။
ဒါဟာရှေးခရိကျွန်းကနေအမွှေးအကြိုင်သည်ကမ္ဘာ့အနှံ့ပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ သို့သော်မူရင်းတိုင်းပြည်နှင့် ပတ်သက်. ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကြေညာချက်လူသိများမဟုတ်ပါဘူး။ နုအပင် Safran အထူးရာသီဥတုအခြေအနေကိုချစ်ကတည်းကကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုမကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။
ယနေ့အဓိကထုတ်လုပ်ရာဒေသများအီရန်၌ရှိကြ၏။ အိန္ဒိယနှင့်ဂရိနိုင်ငံကြီးထွားလာရွှေဝါရောင်များအတွက်အခြားအဓိကဒေသများဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကအများကြီးသေးငယ်ဒီဂရီမော်ရိုကိုနှင့်စပိန်အတွက်အမွှေးအကြိုင်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါပမာဏတစ်နှစ်လျှင်အကြောင်းကို 1,3 တန်ချိန်နှင့်အတူဒီနေရာမှာအတော်လေးသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဗဟိုဥရောပမှာလည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြီးထွားလာဒေသများရှိပါသည်။ အရှင် Wachau ရွှေဝါရောင်နှင့် Pannonian ရွှေဝါရောင်သြစတြီးယားဥပမာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတှေး၏သေးငယ်တဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ဤအဖိုးအမွှေးအကြိုင်နှင့် ပတ်သက်. 2.500 စတုရန်းမီတာဧရိယာပေါ်တွင်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ စပါးရိတ်ရာကာလမျက်မှောက်၌ဖြစ်ပါသည်, မြေတပြင်လုံးရွာကောက်ဖို့အတူတကွကြွလာ။
အဆိုပါစက်ရုံလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာငြိမ်းစေလျက်စွပ်စွဲနေကြသူတစ်ဦးသက်သေ aphrodisiac အဖြစ်ရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံ၌ရှိ၏။ ရှေးခတျေကရွှေဝါရောင်နတ်ဘုရားများနှင့်ရှငျဘုရငျတို့အဘို့အ reserved ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်ခဲ့သည်။ သူတို့ကရွှေဝါရောင်အတူဆိုးခဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်။
အဆိုပါအမွှေးအကြိုင် hemostatic, Revit နှင့်လုပ်သူများစဉ်းစားသည်။ ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာ (TCM) တွင်, ဒါပေမယ့်လည်းပြည်တွင်း Naturopathy အတွက်တံဆိပ်ခေါင်းအမာရွတ်များကိုအသုံးပြုရလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရွှေဝါရောင်အလှတရားအံ့ဖွယ်အစဉ်းစားသည်။ ယင်းအမည်းစက်ရေမွှေးအခြားနံ့သာများနှင့်ရေမွှေး၏ထို့အပြင်နှင့်အတူထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
DiePflanze ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနည်းငယ်ခါးသီးစပ်အရသာတစ်ခုအမွှေးအကြိုင်အဖြစ်ခန့်မှန်းရသည်။ စပါးအနည်းငယ်သာအသုံးပြုသောကြောင့်အစားအစာကိုအထူး touch နှင့်တစ်ဦးအနီအရောင်ကိုပေးတော်မူ၏။
Gewürze – Einheimische Kräuter beim Kochen
ကင်နံ့သာမျိုးကို - ညာဘက်ရာသီ grilling လိုက်တဲ့အခါ
ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူအစားအသောက်ထောင်ချောက် | စား
အစားအသောက် - အရက်သောက်ကိုယ်အလေးချိန်အတွက်အရေးပါသည်
နနွင်း | ရာသီစားနပ်ရိက္ခာ
တစ်ဦးသောပျိုးပင်ဥယျာဉ်တော် Creating | ဥယျာဉ်တော်နံ့သာမျိုး
စနစ်တကျ risotto Making | ဟင်းချက်
မုန့်ဖုတ်သမိုင်း | မုန့်ဖုတ်ဟင်းချက်
နက်နဲသောအရာ, ဗဟုသုတနှင့် trivia ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဥယျာဉ်တော် & ဥယျာဉ်ကိုအပင်
အသက်ရှင်လိမ့်မည်များ၏အားသာချက်များ | ကျန်းမာခြင်း